Yan Aung: February 2007
စာမေးပွဲ ၂-ခုလုံးလည်းပြီးသွားပါပြီ။ ဖြေနိုင်လားလို့မေးရင်တော့ “Hmm. So..so.” ပါပဲ။
ကျွန်တော်က သိပ်ဥာဏ်မကောင်းတော့ နည်းနည်း slow ဖြစ်တယ်ဗျ။ ဒါပေမယ့် အချစ်အကြောင်းဆိုရင်တော့ လာထားပဲ။ ရင်ထဲမှာ ကုန်ကြမ်းတွေ များနေလွန်းလို့ ကိုယ့် Typing တောင် ကိုယ် အားမရချင်ဘူး။
သည်တော့ကာ မိဘရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြောင်း ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်နော်။
မိဘတွေကုို ဆရာလုပ်နေတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် သားသမီးတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ ခံစားချက်ကို နားလည်ပေးနိုင်တဲ့ မိဘမျိုးနဲ့ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အရည်အချင်းတွေ ပိုပြီးတော့ တိုးတက်မြင့်မားလာမယ်လို့ ယုံကြည်လို့ပါ။
ကျွန်တော်တို့ဟာ IT ခေတ်မှာ လှုပ်ရှားရုန်းကန်နေရတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ မိဘတွေငယ်စဉ်က လူငယ်ဘ၀က အေးဆေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ခေတ်မှာက အပြောင်းအလဲ သိပ်ကိုများတယ်။ ဘာကိုမှ တသမတ်တည်း မှတ်ယူထားလို့မရဘူး။ ဘာမှမပြောင်းလဲတာ ပြောင်းလဲခြင်းပဲလို့ ဒီခေတ်က သတ်မှတ်တယ်။ ဆိုလိုတာက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူငယ်ဘ၀ဟာ အရမ်း challenge ဖြစ်တယ်။ အချိန်မရွေး လဲပြိုသွားနိုင်တယ်။ အရာရာကို မျက်စိဖွင့် နားစွင့်နေရတယ်။ မှန်တမ်းလေးလောက်ပဲ ကြိုးစားနေတာပါဆိုတဲ့ လူတောင် သူ့ရဲ့ဘ၀အာမခံချက်ရှိဖို့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို မျက်ခြည်ပြတ်လို့မရဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ရည်မှန်းချက်မြင့်မားတဲ့ လူငယ်တွေအတွက်ဆိုရင်တော့ ဘာပြောကောင်းမလဲ။ ဒီနေရာမှာ မိဘတွေကိုယ်တိုင်က လည်းလူငယ်တွေရဲ့ Need နဲ့ Demand တွေကို နားလည်ဖို့လိုလာပြီ။ ကျွန်တော်တို့ထက်အရင်မွေးလို့ ကျွန်တော်တုိ့ထက်ပိုသိရမယ်လို့ ထင်နေရင်တော့ မှားသွားပြီ။ ဒီခေတ်မှာ ကိုယ့်ထက်ငယ်ပေမယ့် ကိုယ့်ထက်ပိုသိနေတဲ့သူတွေ ဒုနဲ့ဒေးပဲ။ ဒါကိုသိပြီးတော့ အားငယ်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ သူတို့သိတာတွေ အားလုံးကိုလိုက်နားလည်နေဖို့လည်းမလိုဘူး။ ဆင်းရဲလို့လည်း မိဘတွေက သားသမီးတွေကို ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူးဆိုပြီး စိတ်ပျက်အားလျော့နေဖို့လည်းမလိုဘူး။ လူငယ်တွေ ဘာလိုအပ်နေလဲ။
ဒီအချက်တွေကို မိဘတွေဘက်က နည်းမှန်လမ်းမှန်နဲ့ ဖြည့်စွမ်းပေးနိုင်ခဲ့ရင် စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာတရားရဲ့ သရုပ်သကန်ပေါ်လာမှာ အသေအချာပါပဲ။ လူငယ်တွေကိုယ်တိုင်ကလည်း ဒီလိုမေတ္တာတရားနဲ့ နားလည်မှုတွေပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့ မိဘတွေရဲ့ ကျေးဇူးကို အမြဲတမ်း appreciate ဖြစ်နေမှာပါ။
ထပ်စဉ်းစားပြီး ဆက်ရေးမယ်ဗျာ။ Thank you!
အချစ်အကြောင်းရေးဖို့ စဉ်းစားနေတဲ့ ကျွန်တော် မနေ့ည က Gmail ကိုခဏကောက်ဖွင့်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ အစ်မ Online ၀င်လာတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ အရေးကြီးတာ ပြောစရာရှိတယ်ဆိုလို့ ဆက်ပြီးတော့ Chat တဲ့ အခါမှာ သတင်းတစ်ခုကြားလိုက်ရပြန်တယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ Cousin အစ်မတစ်ယောက် ငှက်ဖျားနဲ့ ဆုံးသွားတယ်တဲ့။ ဘယ်မှာဖြစ်တာလဲ ဆက်မေးကြည့်လိုက်တော့ ပျဉ်းမနားမှာပဲတဲ့ဗျာ။ အရင်တစ်ခါ ဆုံးသွားတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ cousin အစ်ကိုရဲ့ အစ်မပဲလေ။ မောင်နှမ ၂ယောက်လုံး ဆုံးသွားတာပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ မသိပါဘူးဗျာ။ ရင်ထဲမှာ ဆို့ဆို့နင့်နင့်ကြီးကိုခံစားလိုက်ရတယ်။ အဲဒီ့အစ်မက မိဘကိုလုပ်ကျွေးနေတာ။ ယောကျာ်းက ပေါ်ကြော့မို့ ကွဲသွားတာကြာပြီ။ သမီးလေးတစ်ယောက်ကျန်ခဲ့တယ်။ စိတ်မကောင်းလိုက်တာဗျာ။ သူဆုံးခါနီး လယ်ကွင်းတွေထဲမှာ ပတ်ပြေးနေခဲ့တယ်တဲ့ဗျာ။ ငှက်ဖျားပိုး ဦးနှောက်ထဲရောက်သွားတဲ့ လက္ခဏာပေါ့။ ဒီည စာမရေးတော့ဘူးလုပ်နေတာ ရင်ထဲမှာ အရမ်းတင်းကြပ်လာလို့ ဖောက်ထုတ်လိုက်ရတယ်ဗျာ။ ဆုံးသွားတဲ့ အစ်ကိုနဲ့အစ်မအတွက် စိတ်မကောင်းသလို မိဘမဲ့ဖြစ်သွားရတဲ့ သူတို့တွေရဲ့ ကလေးတွေအတွက်လည်း ကိုယ်ချင်းစာပြီး ၀မ်းနည်းမိတယ်။
ကျွန်တော်မြန်မြန်ချမ်းသာချင် ပါပြီ။ ဘယ်သူ့ကို စိတ်တိုလို့တိုနေမိမှန်း မသိပါဘူးဗျာ။ ကျွန်တော် နည်းနည်း စိတ်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်ဗျာ။
ချစ်တတ်ဖို့ဆိုတာ ထင်သလောက်တော့ မလွယ်လှဘူးဗျ။ အရမ်းချစ်တာကို ချစ်တတ်တယ်လို့ သွားပြီးတော့ အမှတ်မမှားမိစေနဲ့။ ချစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ အတိုင်းအတာကို မိဘတစ်ယောက်ရဲ့ မေတ္တာနဲ့ အစပြုပြီးနှိုင်းယှဉ်ပြချင်တယ်။ ချစ်ခြင်းတရားနဲ့ ပတ်သက်လာရင် မိဘမေတ္တာကို ဘယ်အရာကမှ မတုပနိုင်ပါဘူး။ ဒါအားလုံးလက်ခံနားလည်ပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် မချစ်တတ်တဲ့ မိဘတွေကြောင့် နစ်မွန်းခဲ့ရတဲ့ သားသမီးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်း မမေ့သင့်ဘူး။ မိဘရဲ့ ကာကွယ်မှုကိုရလွန်းနေတဲ့ သားသမီးတွေမှာ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ညံ့ဖျင်းသွားတတ်ကြတယ်။ မိဘတစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ဟာ သားသမီးတွေအတွက် အားတစ်ခု၊ အထောက်အပံ့တစ်ခု ဖြစ်နေရမယ်။ လောင်းရိပ်ပေးတဲ့ သဘောမျိုး မဖြစ်ရဘူး။
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းက ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခု ပြောပြမယ်။
တစ်ခါတုန်းက ဖခင်တစ်ယောက်ဟာ သူ့အချစ်ဆုံးသမီးလေးနဲ့ ဆော့ကစားနေရာက သမီးလေးကို နည်းနည်းမြင့်တဲ့ ဗီရိုတစ်ခုပေါ်ကို တင်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သမီးလေးကိုပြောတယ်။
“သမီး၊ ခုန်ချလိုက်။ ဖေကြီး သမီးကို ဒီကနေလှမ်းဖမ်းလိုက်မယ်”
ကလေးက ကြောက်တာပေါ့။ နည်းနည်း မ၀ံ့မရဲဖြစ်နေတယ်။
“ဖေကြီးတစ်ယောက်လုံးရှိတယ် သမီးရဲ့။ ရဲရဲသာခုန်ချလိုက်”
နောက်ဆုံးမှာ ကလေးဟာ ဖခင်ရဲ့ မျက်ဝန်းတွေထဲမှာ ယုံကြည်မှုတစ်ခုကို တွေ့ရှိသွားပြီး ဗီရိုပေါ်က ခုန်ချလိုက်ပါတယ်။
နာသွားတဲ့ ကျောရိုးကို ပွတ်ရင်း မယုံကြည်နိုင်တဲ့ သနားစရာမျက်လုံးလေးတွေနဲ့ ကြည့်နေတဲ့ သမီးလေးကို တစ်ချက်စိုက်ကြည့်ရင်း ဖခင်လုပ်တဲ့သူက
“အဲဒါပဲ သမီး၊ ဘ၀မှာ သမီးအယုံကြည်ဆုံးသူတွေဟာလည်း သစ္စာဖောက်တတ်ကြတယ်။ ဒါကို သမီးသိတဲ့ အခါမှာ မတုန်လှုပ်မိစေနဲ့။ မိမိကိုယ်ကိုသာ ယုံကြည်မှုရှိပါ”
စာဖတ်သူ ခေါင်းလည်းညိတ်နေမယ်။ ခေါင်းလည်းခါနေမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သိပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်း အဲလိုပဲ ခံစားခဲ့ရလို့ပေါ့။ အဲဒီ့စာကိုဖတ်ရတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော် ၁၀ တန်းအောင်ခါစပဲ ရှိသေးတယ်။ စာဖတ်သက်သိပ်မရှိသေးဘူးပေါ့ဗျာ။ ဒီစာကိုဖတ်ပြီးတော့ အရမ်းအံ့အားသင့်သွားတယ်။ ဘယ်လိုအဖေမျိုးပါလိမ့်ပေါ့။ ကလေးကို လူတွေကို မယုံကြည်တတ်အောင် သင်ပေးတယ်ပေါ့။ လူတွေကို မယုံကြည်တတ်တဲ့ သူမှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာပေါ်ပေါက်ဖို့ ခဲယဉ်းတယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူနောက်ဆုံးပြောလိုက်တဲ့ စကားကိုလည်း မငြင်းနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ခေါင်းထဲမှာ ခဏနှပ်ထားခဲ့လိုက်တယ်။ ခုတော့ ကျွန်တော်သိခဲ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေက ဒီဇာတ်လမ်းလေးကို တစ်မျိုးကောက်ချက်ဆွဲစေခဲ့ပြီဗျ။ ဒီအဖေဟာ သမီးကိုချစ်တတ်ခဲ့တယ်။ သမီးကို အဖိုးတန်တဲ့ ဘ၀သင်ခန်းစာသင်ပေးဖို့အတွက် သူ့ကိုယ်သူ အမုန်းခံခဲ့တယ်။ လုပ်သင့်တာကို လုပ်ခဲ့တဲ့ မိဘကောင်းတစ်ယောက်ပါပဲ….
မိဘတွေကအလိုလိုက်လုိ့ ပျက်စီးကြရတဲ့ သားသမီးတွေအကြောင်းကတော့ အများကြီးပဲ။ ပြောလို့ကိုကုန်မှာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ မိဘတွေဖြစ်လာကြမှာပါ။ လူပျိုကြီးတွေ၊ အပျိုကြီးတွေလည်း အနည်းဆုံး ကိုယ့်တူ၊တူမလေးတွေကို ပဲ့ပြင်သွန်သင်ပေးတဲ့အခါ idea နည်းနည်းရတာပေါ့ဗျာ။ တစ်ယောက်ယောက်ကိုတကယ်
ချစ်ရင် တတ်နိုင်သလောက် သူ့ကို လွတ်လပ်စွာရပ်တည်နိုင်အောင် ကူညီပေးပါ။ ကိုယ်တိုင်ထူသင့်တဲ့ နေရာရောက်မှသာ ထူပေးပါ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို အရမ်းအကာအကွယ်ပေးနေရင်း သူ့ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အဟန့်အတားပေးမိရက်သားဖြစ်နေတာကို သဘောမပေါက်မိတတ်ကြဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ခုပြောနေတာက မိဘနဲ့ သားသမီးဆက်ဆံရေးနော်။ ခင်ဗျားချစ်တဲ့ ကောင်မလေးကို နင့်ဘာသာနင်လုပ်လို့သွားပြောကြည့်ပါလား။ အရင်းအနှီးအရမ်းများသွားမယ်။ You can’t imagine! အဲဒီ့အကြောင်းကို နောက်ဆက်ပြောပြမယ်။ ခုလောလောဆယ် ဒီမိဘမေတ္တာအကြောင်းပဲ ပြီးအောင်ပြောချင်တယ်။
မိဘကသားသမီးကိုလွှတ်ထားရမယ်လို့မပြောဘူးနော်။ ထိန်းကွပ်မှုတော့ရှိကိုရှိရမယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ culture မှာကိုက ထိန်းချုပ်ဖို့ကို အများကြီးအစဉ်အလာနဲ့ပြောဆို
ဆုံးမခဲ့ကြပေမယ့် လွတ်လပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကောင်း မဆွေးနွေးထားကြဘူး။ လူကြီးတွေကဘာပြောတတ်လဲဆိုတော့ “မင်းတို့ထက်သိလို့ ဒါလုပ်နေတာ၊ မင်းကဘယ်လောက်သိလို့လဲ၊ ငါက မင်းထက် အကြီးပါကွ၊ ငါကဆရာကွ၊ မင်းသိရဲ့လား” ဆိုတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်မှုတွေ၊ အတ္တတွေကိုရှေ့တန်းတင်ပြီး တလွဲဆံပင်ကောင်းနေကြတာကြောင့် လူငယ်တွေမှာ Critical Thinking နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အရည်အချင်းတွေရဖို့ မနီးစပ်နိုင်ကြတော့ဘူး။
ကျွန်တော်က လူငယ်တွေကို သူပုန်စိတ်သွင်းပေးနေတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ လူငယ်တွေကို လူကြီးတွေက မချစ်တတ်လို့ လူငယ်တွေအရည်အချင်းညံ့ကုန်တာကို တွေ့နေရလို့ပါ။
(ဒီနားမှာ ခဏရပ်ပါရစေ၊ မနက်ဖြန်စာမေးပွဲရှိလို့ပါ…)
လူတစ်ယောက်ကို အရမ်းချစ်မိရင် သင်စပြီးတော့ရှုံးပြီလို့ ဖတ်ဖူးတယ်။ ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဗျ။ အရမ်းချစ်မိသွားတဲ့အခါမှာ ဦးနှောက်က ဒုတိယနေရာရောက်သွားတယ်။ မသိမသာရောက်သွားတာမျိုးရှိသလို သိသိသာသာ၊ ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးနဲ့ကို နောက်ကိုပုိ့လိုက်တာမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ။ လိုရင်းကိုပြောရရင်တော့ ခံစားချက်ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုအောက်ရောက်သွားတယ်လို့ ဆိုချင်တာပါ။ ဒီလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာ သာယာနေတတ်တာကလည်းလူ့သဘာဝပဲလားတော့ မပြောတတ်ဘူး။
ရည်မှန်းချက်ကြီးတဲ့လူတွေကတော့ အချစ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ခံစားချက်တွေကို ချိုးနှိမ်ထားစွမ်းနိုင်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့လည်းတစ်ချိန်မှာတော့ အချစ်ကိုတွေ့ထိခံစားမိကြတာပါပဲ။ သူတို့က အချစ်ကို ခဏ နောက်ရွှေ့ထားတာပါပဲ။
အချစ်မှာတစ်ခုမကောင်းတာရှိတယ်ဗျ။ အဲဒါဘာလဲဆိုတော့ အချစ်ကိုဇက်ကြိုးတက်လို့မရ ဘူး။ နည်းနည်းပဲချစ်မယ်၊ ဒီလောက်ပဲချစ်မယ်ဆိုပြီးအလျှော့အတင်းလုပ်လို့မရဘူး။ ချစ်ပြီဟေ့ဆိုရင်တော့ လွှတ်ပြီးတော့ကို ချစ်ပစ်မိလိုက်တော့တာပဲ။ အကျိုးဆက်အနေနဲ့က တော့ အချစ်ကြောင့်လူတွေဟာ ဘာနဲ့မှမတူတဲ့ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးမှုတွေကိုရလာတတ်သလို ဘာနဲ့မှမတူတဲ့ ကြေကွဲခံစားမှုတွေကို ရရှိခံစားလာတတ်ကြတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဘုရင်အဖြစ်ကိုစွန့်လွှတ်ပြီး ချစ်သူနဲ့နေဖို့ရွေးချယ်တဲ့အဖြစ်မျိုးကြားဖူးလာရသလို ချစ်သူနဲ့ကွေကွင်းလို့ ဘ၀ပျက်သူတွေ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေတဲ့ အဖြစ်မျိုးတွေလည်း မှတ်တမ်းဝင်လာရတယ်။
အဲဒီတော့ အချစ်ဟာမကောင်းဘူးလို့ ပြောမလား။ ရှိလည်းကောင်း၊ မရှိလည်းကောင်းလို့ ၀ါးလုံးရှည်နဲ့သိမ်းပြီး ပြဿနာကို ဖြေရှင်းသယောင်ယောင်နဲ့ ပိုရှုပ်အောင်လုပ်မလား။
ဒါအဖြေမဟုတ်ဘူး။ အချစ်ဆိုတာမကောင်းပါဘူးဆိုပြီးတော့ လည်း rejection ၀ါဒီလေသံနဲ့ပြောလို့မရဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့မှာ အာသဝေါကိလေသာကုန်ဖို့မလွယ်သေးဘူး။ အချစ်ကိုလိုအပ်နေသေးတယ်။ ဘ၀ ပျော်ရွှင်မှုအတွက်ရော၊ အောင်မြင်မှုအတွက်ရော အချစ်ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်နေတယ်။ ကျွန်တော်ပြောတဲ့အချစ်က အားလုံးပါတယ်နော်။ ၅၂၈ တွေ၊ ၁၅၀၀ တွေဆိုပြီးခွဲမပြောဘူး။ မချစ်တတ်ရင် ၅၂၈ လည်း ပူတာပဲ။ ချစ်တတ်ရင် ၁၅၀၀ လည်း အေးမြတာပဲ။ ဒီတော့ ချစ်တတ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
(စဉ်းစားလိုက်ဦးမယ်ဗျာ။ ကျွန်တော် မနက်ဖြန်ဆက်ဆွေးနွေးမယ်။)
လှရင်လည်း ချစ်တတ်တာပဲဗျ မမေ့နဲ့နော်။ ကျွန်တော့် Post ထဲကကောင်မလေးကိုမချစ်ဘူးလား။ ချစ်ရင် Download လုပ်ပြီး desktop ပေါ်တင်ထားလိုက်လေ။ မလုပ်မိမှာစိုးလို့ပါ။ ကျွန်တော်လား? လုပ်ထားတာကြာပေါ့။ သူ့ပုံတွေ အများကြီးရှိသေးတယ်။ အချစ်အကြောင်းရေးတိုင်းတင်ပေးမယ်ဗျာ. နော်။
(ကျွန်တော်လေ့လာမှတ်သားခဲ့ဖူးတဲ့ ဆရာတော်ဦးဇောတိကရဲ့ “ချီးမွမ်းခြင်း၊ ကဲ့ရဲ့ခြင်း” စာအုပ်ထဲက ကောင်းနိုးရာရာ စကားစုတွေပါ…)
ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါ ငါ့မှ ဘာဖြစ်လို့ ဒုက္ခရောက်ရတာလဲလို့ မေးတတ်ကြတယ်။ တကယ်မေးသင့်တဲ့မေးခွန်းက ငါဘာသင်ခန်းစာယူရမလဲ၊ ဘာလုပ်သင့်သလဲလို့မေးသင့်တယ်။ ငါတတ်နိုင်တာ ဘာရှိသလဲလို့ မေးသင့်တယ်။
ကိုယ့်အမှားကို ကိုယ်ပြင်ပြီးတော့ ကြာလေအမှားနည်းလေဖြစ်လာရမယ်။ မှားတာဟာဘာမှမဆန်းဘူး။ ပြင်ဖို့ပဲလိုတယ်။ မှားတာက အကြီးမားဆုံး ဆုံးရှုံးမှုမဟုတ်ဘူး။ အမှားကိုမပြင်နိုင်တာကမှ အကြီးမားဆုံး ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တယ်။
လောကဓံတရားတွေနဲ့တွေ့ရတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်စိတ်ကို ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်းနဲ့ စိတ်ကိုပြုပြင်သွားတဲ့အခါမှာ ချီးမွမ်းတာကိုတောင်မှ သိပ်မမျှော်လင့်တဲ့စိတ်မျိုး ရလာမယ်။ ကဲ့ရဲ့တာကိုလည်း သိပ်မတုန်လှုပ်တဲ့စိတ်မျိုးကို ရလာမယ်။
အဆိုးနဲ့တွေ့ရမှ စိတ်ကိုပိုပြီးတော့ ကြည့်ပြီးတော့ ပိုပြီးတော့ ခံနိုင်စွမ်းရည်ရှိတဲ့သူဖြစ်လာမယ်။
ချီးမွမ်းရင် ၀မ်းသာတယ်ဆိုတာ လူ့သဘာဝပဲ။ ဒါဘာမှ မဆန်းကြယ်ပါဘူး။ ဘယ်သူမဆို ဒီလိုပါပဲ။ ကလေးတောင်မှ ချီးမွမ်းရင် ၀မ်းသာတယ်။ အဲဒါရင့်ကျက်မှုလို့ ပြောလုိ့မရဘူး။ ချီးမွမ်းတာ၊ ကဲ့ရဲ့တာကို ဘယ်လိုမှာ သဘောမထားဘဲနဲ့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်စိတ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်၊ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ ကိုယ်လုပ်သင့်တဲ့ အလုပ်ကို ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်း လုပ်နိုင်မှသာ စိတ်ဓာတ်ရင့်ကျက်တဲ့သူလို့ ခေါ်နိုင်ပါတယ်။
အဆင့်မြင့်တဲ့ ဦးတည်ချက်တစ်ခု ရှိတဲ့သူဟာ အခက်အခဲတွေကို ပိုပြီးခံနိုင်ရည် ရှိတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အဆင့်မြင့်တဲ့ စိတ်ထားက ကိုယ့်ခံနိုင်ရည်ကို မြှင့်ပေးတယ်။
ကိုယ်တွေ့ကြုံခံစားရတဲ့ ဒုက္ခထဲက လေးနက်တဲ့ အသိဥာဏ်ကိုရအောင်လုပ်နိုင်တဲ့သူ၊ ဒုက္ခကြုံရလို့ စိတ်ထားပိုပြီး လေးနက်သွားတဲ့သူဟာ အောင်မြင်မှုရတဲ့သူလို့ ဆိုနိုင်တယ်။ ကောင်းတာတွေကြုံရပြီး စိတ်ထားညံ့သွားတဲ့သူဟာ ရှုံးနိမ့်သွားတဲ့သူလို့ဆိုနိုင်တယ်။
ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်သိအောင် လေ့ကျင့်ထားနိုင်ရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို မယုံကြည်တဲ့ အတွေးမျိုးတွေကိုတွေးတဲ့အခါ အဲဒီအတွေးတွေကို လက်မခံဘဲ ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရင် ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကိုမွေးလို့ရပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပင်ပန်းပင်ပန်း ဘယ်လောက်ကြာကြာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာနဲ့ပဲ စိတ်အားတွေတက်လာပါတယ်။
ကိုယ့်အရည်အချင်းကို ကိုယ်မယုံရင် အရည်အချင်းမထွက်နိုင်ဘူး။ ဒါဟာ ရာခိုင်နှုန်းပြည့် မှန်ကန်တဲ့ စိတ်ရဲ့ နိယာမပဲ။ ဒီနိယာမကို လက်မခံလို့မရဘူး။ ယုံကြည်မှုရဲ့ သဘာဝကို လေးလေးနက်နက် နားလည်ဖို့ သိပ်အရေးကြီးတယ်။ ငယ်ငယ်ကတည်းကနားလည်ဖို့လိုတယ်။ စိတ်ရဲ့ သဘာဝက သူ့ကိုမယုံရင် သူဘာမှဖြစ်အောင် လုပ်မပေးနိုင်ဘူး။
နယ်စပ်ဒေသမှာ ကိုယ်ကျိုးမဖက်ဘဲ အများအကျိုးကို မေတ္တာစေတနာအပြည့်နဲ့ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အမေ စင်သီယာမောင် ကျန်းမာရွှင်လန်းပါစေဗျာ….
တရုတ်နှစ်သစ်ကူးမှာ ရွှင်မြူးရယ်မောနိုင်စေဖို့ Chinese Joke လေးတစ်ခုကို recycle ပြန်လုပ်လိုက်ပါတယ်….
Good Wan? (Good One?)
ရင်ထဲကနေ ကိုယ့်ရဲ့ Blog ပေါ်တင်မိတယ်
“မဆုံတဲ့ ဖူးစာ”ရဲ့ “ကျိန်စာ”အောက်မှာ ကိုယ် “သားကောင်” ဖြစ်နေခဲ့တယ်…
“သန်းခေါင်ယံလမင်း” လည်း အဝေးကိုလွင့်သွားခဲ့ပြီ…
“နောက်ဆုံးရထား” ပေါ်မှာတွယ်ရာမဲ့ ထိုင်နေရင်း
“လေလွင့်သူ” တစ်ယောက်ရဲ့ “အချစ်က ဘာမှအရေးမကြီးဘူး” ဆိုတဲ့
(သူများတွေတော့ မသိဘူး။ ကျွန်တော်တော့ ကိုယ်ရေးတဲ့ ကဗျာဖတ်ပြီး
တခွီးခွီးနဲ့ ရီနေမိတယ်ဗျာ…ခံစားရတာကတော့ တကယ်ပါ၊ ဒါပေမယ့် ရီချင်နေတာက ခက်တယ်...)
အချစ်ဆိုတာ စန္ဒရားတီးသလိုပါပဲ။ ပထမတော့ သူ့ရဲ့ ဥပဒေသတွေအတိုင်း သင်ယူရတယ်။ ပြီးရင်တော့ အဲဒီ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို ထည့်မစဉ်းစားတော့ဘဲ နှလုံးသားနဲ့ပဲ ခံစားတီးခတ်ပါတော့။
တစ်ယောက်ယောက်ကို မြင်မြင်ချင်းချစ်မိသွားဖို့ တစ်မိနစ်လောက်လိုတယ်။ ကြိုက်မိဖို့ကျတော့ တစ်နာရီလောက် လိုတယ်။ မြတ်မြတ်နိုးနိုး ချစ်မိဖို့ တစ်ရက်လောက်လိုပြီးတော့ မေ့ပစ်ဖို့ကျတော့ ဘ၀တစ်သက်စာလောက်လိုတယ်တဲ့။
ကျွန်တော့်ရဲ့ဘ၀မှာ ပြန်စဉ်းစားလိုက်တိုင်း နောင်တရစရာ တစ်ခုရှိတယ်။ အဲဒါဘာလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တစ်ယောက်ယောက်ကို ချစ်ခဲ့မိတဲ့ အခါတိုင်း ချစ်တယ်လို့ ပြောမထွက်ခဲ့တာပါပဲ။
အချစ်ဆိုတာ ဘ၀ရဲ့ လမ်းပြအိမ်မြှောင်တစ်ခုပါပဲ။
အချစ်ရဲ့ ဖမ်းစားမှုအောက်မှာ လူတွေဟာ ကဗျာဆရာတွေဖြစ်လာတတ်ကြတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြီးကျယ်မြင့်မားသောအရာများကို မလုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါ။ သေးငယ်သောအရာများကိုသာ ကြီးကျယ်မြင့်မားသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါသည်။
ပိုက်ဆံဆိုတာကို ခေါင်းထဲမထည့်ဘဲ အလုပ်လုပ်ပါ၊ တစ်ခါမှ အသည်းမကွဲခဲ့ဖူးတဲ့ လူတစ်ယောက်လို အချစ်ကိုခံစားပါ။ ဘယ်သူကမှ သင့်ကိုကြည့်မနေသလို ကခုန်ပါ။
What worry does to us? ဘာကိုကျွန်တော်ကြောက်နေတာလဲ ?
ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာ သင့်ရဲ့ အဆင့်အတန်း၊ သင့်ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ လားလားမှ မပတ်သက်ပါ။ သင်၏အတွေးအခေါ်နှင့် လောကကိုသင်ဘယ်လို မြင်လဲဆိုတာအပေါ်ပဲ မူတည်ပါသည်။
လူတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကြေကွဲစရာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ရပ်တစ်ခုက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လက်ရှိဘ၀ကို ကျွန်တော်တို့ မနေပျော်နိုင်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဟိုးမိုးကုတ်စက်ဝိုင်းမှာရှိနေမယ့် လက်ဆုပ်လက်ကိုင်မပြနိုင်တဲ့ နှင်းဆီပန်းခင်းကြီးကို အိပ်မက်တွေမက်နေရင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပြတင်းပေါက် အပြင်မှာ ပွင့်နေတဲ့ နှင်းဆီပန်းလေးတွေရဲ့ အလှကို မခံစားနိုင်ဘူး ဖြစ်နေကြသည်။
I couldn't sleep tonight and thus I was browsing the internet. An idea hit my head and I googled 'Dale Carnegie' on the web. While I was reading through his famous sayings, the above two statements caught my eyes. I read them again and again until I got something for myself.
Most of us are worrying about our future and cannot live out of our present moments. When I was in Burma, I worried about getting admitted to schools withagood financial aid. When I got schools, I worried about gettingavisa. I thought I would be very happy when I got scholarships from school and got the visa. I just thought like that for many years. I'm here right now. But, am I really happy with what I am getting? Not really!
I couldn't enjoy the happy moments while I was in my country. I just keep on worrying about my future. Even now, I am still worrying about my career opportunities and settling down. Wow! When will all these worries end in my life? Or when will my life end up with those worries? They are really tearing me down. I have been worrying about tomorrow and tomorrow again. I should have lived meaningfully at least one day in my lifetime, shouldn't I?
That's why I like the second sayings of Dale Carnegie. I have been putting off my living. I have been dreaming on and on about the magical rose garden over the horizon. And the truth is that these magical rose gardens are not the real ones I want. They are just the mirage. They are just the illusion which will make us think happy. The real happiness lies in our heart, and in ourselves not in outside. Once we can change our thoughts, we will see the world from the different perspectives.
On the other hand, it's reasonable to worry about my future because I have to think ahead for my life. But, there isathin line between worry and action. Most of us are just keep on worrying without taking action. Once we take some actions, all the worries would be wiped out. We thought those worries are the one which help us successful. That's not true. Only our actions can draw us from the misery and concern. If you can't see the worries separately from the problems, your life would be messed up sooner or later. Some people are already eliminated by those unreasoned worries.
To sum up, worries give us nothing but nervous breakdown. Think your best and do with all your might and then go ahead. Don't let yourself be overwhelmed by what you can't do at this moment. Take care of pennies, and pounds would be taken care off.
At least, I'm still worrying about getting rid of worries. Hahaha.
ကြောက်ရွံ့ စိုးရိမ်ခြင်းဖြင့် သင်၏လက်ရှိအဖိုးတန်အခိုက်အတန့်လေးများအား မဖြုန်းတီးပါ
လူတစ်ယောက်ကို မနှစ်မြို့ဘူးဆိုရင်တောင် အဲဒါကိုမပေါ်လွင်စေရဘူး။
လိုတာမရပေမယ့်လည်း စိတ်မပျက်အားမငယ်ရဘူး။ ဒါဟာ စိတ်ချမ်းသာပျော်ရျွှင်စေမယ့် လျွှို့ ဝှက်ချက်တစ်ခုပဲ။
လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ လုံလောက်တဲ့ ၀ီရိယနဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုရဖို့အတွက် မလိုအပ်တဲ့ နေရာမှာ အင်အားတွေ မဖြုန်းတီးမိဖို့ အရေးကြီးတယ်။
တည်ငြိမ်မှုမှာ စွမ်းအင်တွေ ကိန်းအောင်းနေတတ်တယ်။ တည်ငြိမ်တယ်ဆိုတာ မလှုပ်ရှားတာ၊ မထုံတက်တေးဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ စိတ်မပူပင် မကြောင့်ကြဘဲ ကောင်းစွာတည်ကြည်ခြင်းကို ဆိုလိုတာပဲ ဖြစ်တယ်။
ဥာဏ်ပညာ ရွှင်လန်းထက်မြက်စေဖို့နဲ့ တက်ကြွလန်းဆန်းနေဖို့ အားကစား တစ်ခုခုကို လိုက်စားသင့်တယ်။
အလိုဆန္ဒတွေကို ချုပ်တည်းနိုင်ရမယ်။ တဒင်္ဂပျှော်ရွှင်မှုနဲ့ ရေရှည်ကောင်းစားမှုကို အလဲအထပ်မလုပ်သင့်ဘူး။
နောင်တ တစ်ခုရဲ့  နှိပ်စက်မှုအောက်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မနစ်မွန်းမိစေနဲ့။
ကိုယ်ချမှတ်တဲ့ စည်းကမ်းကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မလိုက်နာရင် သူများချမှတ်တဲ့ စည်းကမ်းတွေအောက်မှာ တစ်သက်လုံးနေသွားရလိမ့်မယ်။
ဘ၀ဆိုတာ မာရသွန်ပြေးပွဲ၊ ဒီတစ်ကွေ့မှာ ခဏနောက်ကောက်ကျရှုံးနိမ့်သွားပေမယ့် နောက်တစ်ကွေ့မှာ ပြန်အနိုင်ယူနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ ရှိသေးတယ်။ အရေးကြီးတာက နိုင်လိုစိတ်နဲ့ ခွန်အားလျော့မကျသွားဖို့ပဲ။
အချစ်အကြောင်းချည်းပဲရေးနေရတာ နည်းနည်းငြီးငွေ့လာလို့ လိုင်းပြောင်းလိုက်ဦးမယ်။ အတွေးတစ်ခုရလာလို့ပါ။ ဘယ်သူပြောခဲ့လဲဆိုတာတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး။
သိုင်းကားထဲမှာ ၀ူတိဂိုဏ်းဆရာကြီး (Evil ပေါ့ဗျာ)က ၀ူတန်ဂိုဏ်းကို Challenge လုပ်တယ်။ ၀ူတန်ဂိုဏ်းချုပ်ကြီး ကျန်းဆန်းဖုန်းက သူ့ရဲ့ တပည့် ၀ူကျိကို ဂူအောင်းပြီး နာမည်ကျော် ထိုက်ကျိသိုင်းကို ကျင့်ခိုင်းတယ်။ နည်းနည်းကျင့်ပြီးတော့ ဆရာကြီးကမေးတယ်။
(သတိ၊ တရုတ်လို ပြောကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။)
“သိပ်မမှတ်မိဘူး ရှီ့ ဘော”
“ပိုရှုပ်လာပြီ ရှီ့ ဘော”
“အရင် တတ်ထားတာတွေ အားလုံးပါမေ့ကုန်ပြီ ရှီ့ ဘော” လို့လည်းပြောရော “မင်းထွက်တိုက်လို့ရပြီ” တဲ့။
၀ူကျိရော (ကျွန်တော်ပါ) Blank Face နဲ့ ဆရာကြီးကိုပြိုင်တူကြည့်လိုက်ကြတယ်။
“Please Explain in English, Master!
If not, we will screw you, my man!”
“Well, well, well...
Wu Kyi, If you know something and do within that boundary, you are not reallyalearned person. Your talents are limited.
If you forget what you learn because you work your ass off, it does not mean you become useless. It means you just broke that very boundary.
The world is wide open for you and that’s why you feel so helpless at that golden moment. Actually, your success and achievements know no limit now. Only the sky has limit for them!
Go for it, dude! Crash that bastard! Honor me and our organization, “Wu Tang”. You are the man! You can do it!”
ဆရာကြီးပြောတာကို ကျွန်တော့်ရဲ့  Tablet PC နဲ့လိုက်မှတ်ထားလို့ ဗာဒံစေ့တွင်းကျ (ခရေစေ့ တွင်းကျက Cliché ဖြစ်သွားပြီ) ကျွန်တော် recall ပြန်လုပ်နိုင်တာပါ။
ကျွန်တော် ကိစ္စတော်တော်များများကို နက်နက်ရှိုင်းရှိင်းမှတ်မိနေသေးတယ်။ ခံစားမိနေသေးတယ်။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော် သိပ်ပညာမတတ်သေးဘူးဗျာ။ အောင်မြင်ဖို့ မှတ်ဥာဏ်က အရေးကြီးသလို မေ့ဥာဏ်ကလည်း Key Player ပဲဗျ။
မေ့သင့်တာကို မမေ့နိုင်ရင် Sai Sai Kham Hlaing လည်းဒီလောက် အောင်မြင်လာမှာ မဟုတ်ဘူး။
လောလောဆယ်တော့ တည်းတည်းလေးတင်ထားတဲ့ ခေါင်းထဲက စာတွေကို Confirm လုပ်ရဦးမယ်။ မေ့ကုန်ရင်တော့ “Only the sky has limit” ပဲဗျာ။
ဇောက်ထိုးမိုးမျှော်တွေ ဖြစ်ကုန်မှာကို ပြောတာ။
“ဗုဒ္စေါမေ သရဏံ အညံနတ္တိ“ ပါ ဘုရား…
သူမ ပြန်လာတော့မယ်။ ကျွန်တော် ညနေခင်းက တရေးအိပ်နေတုန်း ဖျတ်ခနဲ လန့်နိူးသွားတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူမ ကျွန်တော့်နားကိုကပ်ပြီး ကျွန်တော့်နာမည်ကို ခေါ်လိုက်လို့ပါပဲ။ အသေအချာကို ကြားလိုက်ရတာ။ သူမ အဆင်မှ ပြေရဲ့ လားလို့ စိတ်ပူမိလိုက်သေးတယ်။ နိူးလာတော့လည်း စိတ်သိပ်မကြည်ဘူးဗျာ။ ဖုန်းဆက်ကြည့်ချင်လာတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ကိုပြန်ထိန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီအချိန်ဆိုရင် သူမရဲ့  ချစ်သူနဲ့ ဖုန်းပြောနေမှာလေ။ ကျွန်တော့်ရဲ့  ပူပန်မှုတွေ အပေါစား ရယ်သံတွေကြားထဲမှာ မျောလွင့်သွားမှာ၊ သနားစရာ သတ္တ၀ါအဖြစ် အမြင်ခံရမှာ မလိုလားဘူး။ ကျွန်တော် မာနကို မကိုးကွယ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အချစ်ကိုတော့ လုံးဝတန်ဖိုးထားတယ်။ တစ်ခါကြုံဖူးရင်လည်း အသည်းစွဲနေအောင်မှတ်ထားတတ်တာ ကျွန်တော့်ရဲ့  ညာဉ်ပဲ။ ကျွန်တော့်ကို သူမ မလိုအပ်တော့တာ သေချာသွားလို့ လက်တွဲဖြုတ်ခဲ့တာပဲ။ မ၀ယ်ချင်တဲ့လူတစ်ယောက်ကို ဇွတ်အတင်းဆက်ရောင်းနေရင် ဘာဖြစ်သွားမလဲ။
“ခင်ဗျားရဲ့  ပစ္စည်းတန်ဖိုးကျသွားတာပေါ့။”
ကိုယ့်ပစ္စည်းကို ကိုယ်ယုံကြည်သလို သူများယုံအောင်တန်ဖိုးထိန်းတတ်မှလည်း တန်ဖိုးဆိုတာ ဖြစ်လာရတယ်လေ။ နားမလည်လို့ ထွက်သွားရင် သွားစမ်းပါစေ။ တန်ဖိုးချမရောင်းဘူး။ ရောင်းရရင်ပြီးရော ဆိုတာထဲမှာ အချစ်မပါဘူး။ ဒါကျွန်တော့်ရဲ့  အချစ်နဲ့ တန်ဖိုးပဲ။
ထားသင့်တဲ့မာန တစ်ခုကိုသင့်တော်အောင်ထားတတ်ရင် တန်ဖိုးဆိုတာ ဖြစ်လာတယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့  အခန်းထဲမှာတော့ ကျွန်တော့ရဲ့  မာနတွေနဲ့ နွေးနေတယ်။
(Heater ဖွင့်ထားတာကြောင့်လည်း ပါတာပေါ့လေ…)
ဒီနေ့ ၂ ဒီဂရီတဲ့ဗျာ။ Centigrade ကိုပြောတာနော်။ အပြင်မှာ အရမ်းကိုအေးနေပြီ။ ဒီလိုအေးအေးချမ်းချမ်းရှိနေတဲ့ နေ့လေးမှာ အိမ်ထဲမှာအောင်းပြီး စာလေးဖတ်လိုက်၊ ကဗျာလေးရေးလိုက်၊ Blog လေးကို update လုပ်လိုက်နဲ့ပဲ အချိ်န်ဖြုန်းနေလိုက်တော့မယ်။ လက်ကွက်ရိုက်တာ နှေးတော့နှေးနေသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ကြိုးစားနေပါတယ်။ လင်ကွန်းရဲ့  စကားကို အဌားယူသုံးလိုက်ဦးမယ်။
“I’maslow walker but I never turn back” တဲ့။
အဲလိုပဲဗျ။ တစ်ခြားသူတွေကို လိုက်မမှီတော့ရင် အဲဒီ့စကားနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခဏစိတ်ချမ်းသာခိုင်းလိုက်တယ်။ ပေါ်လီယာနာရဲ့  အကောင်းမြင်စိတ်လိုပေါ့ဗျာ။
ဒါပေသည့် ကိုယ်ဘာကောင်လဲဆိုတာတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲ အသိဆုံးပါ။ ဟုတ်တယ်ဟုတ်။
ဟား! ပျော်လိုက်တာဗျာ။ ဗမာလိုရိုက်လို့ရပြီ။ လက်ကွက်တော့ ပြန်ကျင့်ရအုန်းမယ်။ ရင်ထဲမှာ ခံစားချက်တွေများနေပြီ။ စာရေးချင်တာ လက်ကိုယားနေတာပဲ။ သူများတွေရေးထားတာလေးတွေဖတ်ရတော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ရေးချင်လာတယ်။ လူပဲဗျာ၊ ခံစားချက်ကတော့ရှိတာချည်းပဲပေါ့။ ကိုညီလင်းဆက်နဲ့ ကိုမောင်ရိုးကို ကျေးဇူးအရမ်းတင်တယ်ဗျာ။ သူတို့ရဲ့ Websites တွေထဲက Guidelines တွေဖတ်ပြီး လျှောက်လုပ်ကြည့်ရင်းနဲ့ ရသွားတာ။
အဝေးမှာနေရတာကြာလာတော့ ကိုယ့်ရင်ထဲမှာ Potentials တွေများလာတယ်။ Stress တွေလည်းပါတာပေါ့ဗျာ။ အဆင်ပြေနေတယ်ဆိုရင်တောင်မှ အနည်းဆုံးသူငယ်ချင်းတွေကိုလွမ်းတယ်။ အိမ်ကိုလွမ်းတာတော့ ဘာပြောကောင်းမလဲ။ ကိုယ့်ရဲ့ Blog ထဲမှာ ရင်ထဲက Tensions လေးတွေ ကို ပုံစံလေးပြောင်းပြီး ချရေးလိုက်ရတာ အရမ်းမိုက်တယ်။ Bloggers တွေအချင်းချင်း ပညာဖလှယ်ရတာလည်း ကြည်နူးစရာပါပဲ။ မိုးလင်းပြီ။ Class သွားလိုက်ဦးမယ်ဗျို့......
Sometimes, I amabird
flying high to the sky and soaring over the river
Sometimes, I amayoung man
setting goals and charging towards them
Sometimes, I amalazybone
sleeping in the bed and skipping my morning classes
Sometimes, I amaman
being loved and looked upon by my family members and other needies
Sometimes, I amaloner
missing home and longing for the love from faraway land
Sometimes, I am an insane person
feeling so nervous and knowing nothing to do
Sometimes, I amawise man
sitting calm and thinking about the relationship between me and the world
Life has bright and dark sides
So does my life have
To taste the essence of the warm sunny day
I am now walking in the cold windy night...
I wish the night is not too long nor too short
If the night is too short, my works would not be so special
If the night is too long, I am doubtful about my endurance
I don't have the right to choose the longevity but the quality of my life.
Cause 'I am the captain of my soul' but not the creator of it!
(I wish I could write my poem in Burmese!)
"Big Dancing Small Town" makes big news in America!
These two guys make the headline news in America. They are described in 'Good morning America', 'Indy Star', and in many other newspapers in Maryland, Georgia, etc. and they got the national accalim too. Watch it and appreciate their creativity and sense of humor. And also read how the viewers left their feedbacks on youtube website.
I don't know what to do next. That's funny.
And that's frustrating too. I always wanna beadesicive person taking actions withafocused mind. I'm now at the crossroads of opportunities. I don't know which one I should grab and which one I should let go. Each way has its own strength and weakness. I found one chance which will make my life easier than ever. But, I'm reluctant to go that way because it's against my inner desire.
When you are confused, you become fluctuated. When you fluctuate, you become confused. Whatavicious cycle!
Well, the best way to solve this problem is to sleep now.
It's enough for today to get confused. I still have tomorrows yet to come.